Xaalada Baydhabo oo kacsan iyo Xildhibaan lagu dilay , Wararkii u dambeeyay | KALSHAALE
Dec 14, 2018 - 50 Aragtiyood
Baydhabo ( Kalshaale ) Wali xiisad ayaa ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dagaal culus oo maalintii shalay ka dhacay bartamaha magaalada kaa oo ka dhashay xarigga Mukhtaar Rooboow Abuu-Mansuur.
Wararka ayaa sheegaya in mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka koofur Galbeed uu ku geeriyooday rabshadaha ka taagan magaalada Baydhabo.
Xildhibaan Abdishakuur Yacquub oo ahaa Guddoomiyihii guddiga amniga ee Koonfur Galbeed ayaa lagu dilay Baydhabo.
Xaalada Magaalada Baydhabo ayaa Maanta ah mid kacsan, waxaana jirin cid ilaa iyo hadda isku dayeysa inay xal ka gaarto xaalada cakiran iyo rabshadaha ka socda Magalada Baydhabo.
Dadka qaar ayaa gur-yahooda Banaanka uga soo bixin cabsidda ka taagan magaalada, xilli magaalada ay isku diyaariyaan in ay howlgal ka fuliyaan ciidamada Booliska ee halkaasi ka howlgalla.
Inkastoo xiisadaasi ay ka jirto Baydhabo haddana dhinaca kale waxaa ay guddiga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed sheegeen in wali jadwalkii doorashada ee 19ka bishan waxba iska badali lana qaban doono.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (50)
Ethiopia ayaa qaraxyada dhigey, Ethiopia ayaa hubka siiyo UGUS
Ethiopia ayaa miinooyinka ku soo xiro Eeley isku qarxiso Xamar..
Waa in dib loo bilaabo dagaal Ethiopia dalka looga saarahayo.
Labada nin ee talada dalka haya ma ka fikireen tallaabooyinka ay qaadayaan waxa ka dhalan kara.
Ma maanta ayay Xabashi u adeegsadeen in shacabka baydhaba la gumaado?
Ayaan darrada Somalia waxaa ka mid ah in maalin walba dabadhilif xabashi, Xabshida isla qoraan xalqad ama chapter madow taariikhda murugada badan ee dalkeenna.
Waa in Soomaaliya laga xoreeya xabashida, Kenyaatiga iyo Burundiga iyo dabadhilfkooda oo dhan haddii qarannimo la doonahayo.
Nin degan ayaa ka fikiro inuu ficilkasto leeyahey faa’iido iyo khasaaro.
” Fudeyd fasbaa ku roon.
Dowlanimada somaliyeed meshii ugu ficnayd bey
Maraysaa casimadina madaxdii calamka cawa
Sexatay arinta robow waxay la mid tahay ninkii
Dilay dawee lee yihiin maalintii la qarxiyey hoteel
Shamow oo lagu xasuqay wax garadkii soomaliyed
Ninkii idacadaha ka hadlay oo shegtay qaraxa
Roobow buu ahaa mantana dad baa leh maxaa
Loo xiray ninkii idilay waa un dalkaan yusan dowlad
Noqon ee isbarada i dhiga
Waxaa nasiib darro ah madaxdii dalka ugu sareyso in ay xamar kula caweynayaan afwerki. Shacabkii baydhabana xabashi xasuuqeyso.
Taariikhdu wey qormeysaa waqtiga aragnay waa laga bixi donaa.
Waagii xasan qoslahaye joogay waligaa ma tiri itoobiya dagaal ha lagu qaado oo waddanka ha laga saaro.
Xiligii cabdulahi yusuf iyo haddeer baa lagaa hayaa itoobiya waa cadow ee lala dagaalo.
Garqaad markii kisnaayo ololaysay oo hubka barre loo dhiibayey xasan qoslahaye xamar buu hadba ciddii u timaada la qoslahayey. Yaa eey koor leh marke?
Xassan iyo farmaajo waa isku mid waxey maamulaan ONLY GOOF hiraab – waa markaan u jawaabo siduu aqligaadu u shaqeyn hayo.
miyaad kalshaale joogi jirtey waqtigii xassan shiikh.
mise xassan shiikh iyo farmaajo ayaa is dhaamo ama kala duwan dhan ficil iyo dhan deegaanb..
adigu reer bari ayaad tahey maxaa kaa galey maamulka Banaadir State
Aarka hargaysa iyo laalays
Waxaan maalmahaan u jeeday adinkoo leh hawiyoow kaca, digil iyo mirifoow kaca.
Dee adba kac waa taas cir iyo dhulba lagaa soo xiraye.
Cuqdadii aad somalia uga carartay baad rabtaa inaad dadka ku daaratid. Adinka oo kale waa la idin karantiilaa si aydan cudurka halista ah dadka ugu daaran.
Somaliya iyo Ethiopia soo kuwii Saaxiibada ahaa ee heshiiyay ee lahaa wax baanu Albaabo Soo Xidhnay
ETHIOPIA QORSHEHEEDA KU AADAN SOMALIA WAXBA KA BEDELI MAAYO NIN OROMO AH AYAA YIMI.
Kalshaale waa joogi jiray waana akhrisan jiray. Waligaa itoobiya aan la dirirno kaama maqal. Tan kale.
Xamar anigu goof hiraab uma aqaan.
adiga waxaa hadal iyo ka dhihid kaaga baahan ninkaan (labadii god reer bari ayaa la bilaabey yaad film u dhigeysiin may be MARIIXAAN)
Hadduu English kugu adagyahey wuxuu leeyahey sidaan
1. Puntland wey ka madaxbanaantahey SOOMAALIYA
2. Soomaali badan (not chines badan ) ayaa MADAXBANAANI ku heysato PUNTLAND — yacni Somali badan ayaa madaxbanani ku heysato UK camal.
3. Somaliya maahan – Mogdishu – and MOGADISHU MAAHAN SOOMAALIYA.
KA HADAL IYO KA GILGILASHO KAAS AYAA KAAGA baahan-
Shacab waynaha puntland waa taageersan yihiin dawladda federaalka. Siyaasi caraysan waa iska jiraa sida farmaajo horay u sheegay.
Muhiimaddu waa shacabka.
Anigaa kula hadlayaa shacabka ka mida
Kana waa madaxweynihii isku caleemo saarey KISMAAYO
qodobada ka soo baxey
1. Ineysan dowladda federaalku masuul ka noqondoonin macaawooyinka DALALKA maamul goboleedyada
2. In wixii hadda ka dambeeyo caalamku kala xaajoodo golaha midnimada arimaha DALALKA maamul goboleedyada.
3. In ciidamo gooniya dhisan doono
4. Inaan waligeen tageyn muqdisho
Anigu 28 sano ka hor baan kaa sifeeyay waqooyi, oon kaa dhigay maato caano leh, maantana waanigaa dul fadhiya hoygaagaa garoowee, anigu waan ku aqanaa,waxaan xabad dhafoorka laga saaro ahayna jawaab kaagama dhigo
Sifiican baan kaagaa sifeeyay arladii waqooyi aka Somaliland.
Kala calaf qaadnay inaguye JAREERTAAS & MAYMAYGAAS kolba xabashi & ethiopian udalbo oo ku gumaad iilayn awood kale ma lihid oon ka ahayn inaad dalka shisheeyee soo galiso ood ku gumaade!!
soo munaafiqnimo maahan waxa idin dhex geliyey – masuul iyo shacabkiisa dood iyo dhaliil soo jeedin ka dhaxeyso –
ma waxaad iga sugeysaa inaan farmaajo uga xishoodo waxaan uga xishoon waayey xassan shiikh
ma waxaad iga sugeysaa inaan farmaajo ku xushmeeyo nin asagaba xushmeyn waayey (daarood)
– labaduba (xassan shiikh iyo farmaajo) waxey maamulaan ONLY GOOFKEYDA IYO HANTIDEYDA ( waa markaan kuula hadlo only aqliga daarood fahmo)
– nin diidey inuu xataa dekedda boosaaso hoos keeno dowladda inaan kala doodo dowladda only banaadir iyo shabeelooyinka oo ah gobolo ay degaan hal qabiil waa igu ceeb..
– C/yuusuf waxaa dambiil ku keenay Meles oo EXILE IYO XABAD AYAA U QORNEYD,
laakiin FARMAAJO anagaa dooraney hadduu fulinwaayo waxaan ka fileyno sidii XASSAN SHIIKH ayuu qul qulaa
-Yaxaas raadin shoqo childcare ah ma aragteen..
Mar hore baan ku iri goofkaan xamar inaad kaligaa leedahay kuguma raacsani.
Tan ah shacab iyo madaxwayne ha dhex galin. Anigu miyaana shacabka ka mid ahayn. Tan kale shacab ma diidin dawladda ee waxaa laga fadhiyi la’yahay waa shaqsiyaad fawdo iyo qas bartay oo aan dawlad rabin. Qabiilna ka duulaya
Waxaad sifaysay ma leh. Qof laleeyahay baa tahay. Meel walba waa lagaa soo xiray. Meeshaad sheeganaysid adduunku wuxuu u yaqaan inuu madaxwayne ka yahay mudane farmaajo. Muuse local cidi ma taqaan.
Xildhibaano iyo wasiiro baa xamar kuu joogo oo farmaajo doortay. Maxaad sifaysay marke.
Goormaad TUKARAQ & LAASKII ciidamo Ethiopian ah soo galinaysaa ilayn awood kaleeto ma lihid ood ku timaadee, daarood oo dhan u yeedhay adoo tolaayeey dhulka IDOOR haystaan xoraynayaa leh.
Xoolahii reer SOOL kugu dhamaade,sanad & dheeraad bay maraysaa maalintaa tolaayeey lahaydeene maxaa idin xayiray?!
Wax ban soo xidhay & sheeko huuhaa bay iisku qancinaysa, soowkii wiigan Madaxweyne ku xigeen ka Somaliland Gaadhay hingriis ka oo socday ilaa baarlamaanka BELGIEUM waxaad soo xidhay aawaay.
Hadeerna WASIIR FARATOON soowka baashalayaa USA & WASHINGTON!!
maxaa aniga iga galey – C/raan C. shakuur iyo rasalwasaare Sharma’ake oo baddii iibsadey.
midda labaad miyaad kala taqaan farqiga u dhaxeeyo nin caalamka u sheegahayo – puntland maahan soomaaliya
iyo nin u xanaaqasan kursiga Rasalawasare Kheyre aniga igu fadhiisi..
– xishood iyo aqlig gobonimo haddaad leedihiin maanta ka maadnaan hadasheen ARIMAHA BANAADIR State adinkoo og arimaha uu ku jiro GAAS
– mar dambe ha igala doodin arimaha XAMAR ilaa dekedda BOOSAASO la hoos keenahayo DR BAYLE..
Waa igu ceeb inaan Boondheere kala doodo nin dudun saaran.
Adeer niman dhulbahante oo aad marti u tahay ani wax wayn ha iiga dhigin.
Ma iaaaq baa?
Adoo kaligaa ah xiniiyahaaga ma ku tagi kartaa
Adeeer anigu maanta tuuladaada garowe baan 60km u jiraaa, la sheekeyso JAREERTA & MAYMAYGA aad kaaraha Ethiopian ka u dalbatay anigu 30 sano ka hor baan waqooyi aka Somaliland xabad afcas ah kaagaa sifeeyay oon goofkaagi kugu celiyay ooon hadana saas kaga hadhine dhulkaagi 98% calankaygu ka babanaya.
Miyaan muranaa sxb.
Meeshaqd sheegaysid ee tukataq waxaa u dhashay ina koorre asagaana ku geeyey oo aad marti u tahay markuu caanaha kaa dhamaystana waa lagu qalin sidii sac guray oo kale.
Taas wax kuu noqon maysee.
Hawiyoow kaca wada taasaa idiin shaqaynaysee si markii somalia burburtp aad daarood uga raysatid. Kkkkkk
Maya, maya, may, sida aan inbadan sheegay, asxaabta qaarkood lama qabbo in shidadda Somaliya tahay Ethopiya amab kenya, amaba dal kale. Shidada Somaliya waa dad Somaliyeed oo caqli xun.
Tusaale, shidada Somaliya amaba intabadan Koonfurta Somaliya waxaa ugu wacan caqli daanyeernimada dhaheeysa, Xassan Daahir Aweeys iyo Muqtaar Roobow yaanan lala xisaabtamin markii chance lagu hello, iyaga oo dad badan laayay. Shidada Somaliya waa xisaab la’aanta maskaxda dad badan.
Sida, in madaxweeyne Farmaajo iyo ra’iisalwasaaare Kheeyre loogu soo dhuunto/gambado, “muwaadin Somaliyeed ayeey dowladda u adeegsatay Ethopiya” iyo hadalada uu ku hadlaan daanyeerada Abdirahmaan Abdishakuur iyo Ahmed Macaqlin Fiqqi.
Labadaan nin ee daanyeerada ah dad badan ayeey duufsadaan, waana qaswadayaal. Waxeey kaloo yahiin dad qatar ku ah dowladnimada iyo jiritaanka umadda Somaliyeed, haba ugu darnaato qabiilada eey sheegtaan. Oo eey rabaan in eey galiyaan dagaalo maalaayacni ah markasta, just like, sida eey u soo galiyeen nimanka adeeradood ahaa labadaan daanyeer iyo Xassan Daahir Aweeys.
Ileeyn ilmo la’iska dhaldhalo, iyada oo qorsho iyo mustaqbal loo sameeyn. “the chickens have come home to roost” hadeer, waxii la qasay 30 sanno oo laqasaariyay ayaa mirahooda la’arkaa. Dad ayaana rabba in meel kasii xun eey kasii dagto. Waxaasi waa doqonimo.
Dabcan madaxda dowladda dhexe ee hadeer iyo kuwii horeba ciladda iyo qaladaad tirro badana waa leeyahiin. Laakiin, toosin, nasteexeeyn, iyo dhaleeceeyn wax toosin ah ayeey u baahanyahiin. Ee uma baahna, qas iyo fowdo.
Mid kastoo dhabayaco ah ama daarod ah markaad la doodayso ood ku tiraahdo goormaad TUKARAQOOW xoraynaysan waxay ku oodhonayaan dhulmahante ayaa kuka socda markaa xabada kugu ridi kari mayno,
oo adeer ciidamada qaranka cidwaliba waa ku jirtaaye mxaad dhulmahante uun ugulasoo baxdaan miyaad ka cabsanaysana.
Ciise, Samaroon, isaaq, madhibaan, dashiishe,warsangali, dhulmahante, cid ka maqani ma jirto cidanka qaranka Somaliland, dhulmahante marmarsiiyo idiin noqon maayee hadaad xaniinyo leedahiin calanka Somaliland dhulkiina ka dajiya.
Hadji kalena isku qanciya INA CALI KOORAA idinla socda …waleee ISAAQ baan ka kicn meeluu ku habsaday isagoo horey usii socda mooyee.
Sxb tabar daro ayaaa ku haysee bal TUKARAQ ciidamo ETHIOPIAN ah u dalbada haydiin xorayso & LAASCAANOD.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
War horta maxaad lasoo bikbikaacsataa markii raggu wax kale ka hadlayaan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Iska sii uunso qaadka iyo kabankana ha kala joojin inta laguu soo jeedsanayo.Tukaraq hada lagama hadlayee Baydhabaa laga hadlayaayaa
Boondeere iyo xamar baad ku waalatay. Anigu waxaan ka hadlayaa waa dawlad soomaaliyeed oo ay hoos yimaadan 18 gobal ee somalia inkastoo aan dhulka gacan lagu wada hayn siyaad barre kadib. Haddana kor baa laga maamulaa oo waa dawlad la aqoonsan yahay.
Xamar anigu waxaan u aqaan caasimada somalia.
Maqaamkeeda cidna ma diidi karto laakiin saa u rabtid uma rabo adi waxaa rabtaa in reer gaar ah loo sameeyo.
Ana waxaan qabaa inay ka dhaxayso umadda soomaaliyeed macaa kaas hargaysa jooga oi cuqdada qaba.
Shalay halkan adoo ka bidhiwaaqlaynaya ayaan kuu jeedey oo ku faraxsan Roobow in itoobiyaan qabteen oo muqdisho geeyeen
Maantana itoobiyaan baa dagaalka Baydhabo wada ayaad na leedahay. Afkaaga iyo dhagahaagu isma maqlaan miyaa mise laba Dabshid baa meeshan wax ku qora.
Xoog la muquuniyey xoog la muquuniyey buu dhalaa anigu horaan u sheegay Baydhabo arinteedu maaha sida ay qoloda Nabar iyo Naxdin u dhigteen shaxda.
Nimankaa eelaydu way sii jeed badanyihiin lkn maalinka ay soo jeestaan kabtay ma aragtay baa ka dhacaysa. Taa ka waraysta mooryaantii Hg ayaa soo tijaabisee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waa ogahay sxb in TUKARAQ nabbar & Naxdin idinku tahay & BOOG aan bogsan.
ROOBOW BAA YAABAY.
Roobow nin dad badan laayey oo gacan ku dhiigle yahay la iskuma hayo laakiin qoladii uu ku jirey iyo wixii uu aaminsanaa hadii uu ka toowbad keenay waxay ahayd in Baydhabo inuu maamulo isaga looga dambeeyo
ileyn qoladii uu ka tirsanaa waa la ogaa wixii kala qabsaday aakhirkiiye.
Jin ninkii keena ayaa bixiya ayaa la yiri.Roobow waxaan hubaa inuu meel saari lahaa Shabaabka Bay iyo bakool jooga.Lkn dad aan caqli dheer iyo wanaaga iyo sharafta soomaali inay soo noqoto aan ka fakareyn ee doonaya oo kaliya inay helaan dad u nacamleeya oo kaliya ayaa ilaahay qoorta u geliyey.Way ogyihiin Roobow inuu yahay nin karti leh mayal adag oo shacbiyad badan haysta inuu yahay marka ma doonayaan nin caynkaas ah inuu Baydhabo maamulo ee waxay doonayaan mid ay xoogaa qadaadiic ah usoo tuuraan oo sida Waare ku adeegtaan
Waar maanta waa jimcee miyaanad murqaamayn waa ku sidee maxaa meesha ku dhigay.
Sxb waxoogaa quraacdaan idinku sugaayay hadaan bariis kii soo dhacsanaya, qaadkuna waa hadhoow insha allah, lixdii subaxnimo waayee hadeer goorsheegta Canada.
ma waxaa kugu adag aqrinta afsoomaaliga mise waxaadan kala aqoon farqiga u dhaxeeyo Ethiopia iyo ROOBOW.
– Arinta ROOBOW Shaley aheyd oo godkii jilicow ayuu liinta kula cabahayaa xassan ugus –
— adinkase waxaa hurdada idinka toosiyey qabrigii AABO MELES ayaa loo soccdaa, ma waxaad is leedahey haddii siyaaro dambe ma jireyso..
SOOMAALIYEEY WAKAAS AQLIGA BARI YAALO.
Axmaaro halala dagaalo iyo soomaali halala dagaalo waxey jecelyahiin soomaali halala dagaalo.
idinku kuma jirtaan wixii dagaal ah – diyaanadiina iyo fooxa shita.
Ahmed Najaad war Tukaraq hada snm Gododod hoostood bay qoteen. Iga bixi allahayoow bay qaadayaan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Doorashadu intay dhaceyso ha sugeen uun iga walee mid ka baxsanmaayo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Indho indho baa yaabay kkkkkk
idinku maku jirtaan musharixiinta Puntland.
Murqaan wacan sxb kaftan yaqaan baad tahay rageedii anigu ruuxayga hadaa la isoo sheegay sooooooo dhacyeeeeeeeey ee soo carar baa mid cidiinaa oo aanu saaxiibo nahay igu leeyahay. Halkaa ayaan aniga iyo isagu caawa isu tookhaynaa Tukaraq arinteeda waan isla jeex jeexaynaa haddii muqaanku naga tuso.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
nin xun maahid laakiin waxaa wali kaa maqan inaad fahanto wax ka dhihid MAQAAMKA Xamar waxaa iska leh dadka degan deegaanka BANAADIR.
Xageena haddaa la aadamey ee waa noo markale haddaad figrad ka heyso qaabkaad JECLAAN LAHEYD INEY XAMAR NOQOTO.
(xadde ogow caasimadda dowladda dhexe iyo deegaanka gobolka Banaadir waa kala labo).
Musharax shalay booqday ji
ida Tukaraq ,ugu a deeqay shiidaal Ciidamada
Dowlada haddii aad taageersantahay iyo haddii kalaba Tigreegii Orom ayaa kuu badeley adigu maxaad ku kala jeceshahay orom iyo tigree.
Mise waxaad run moodey sheekadii beryo dhawayd la isla dhex marayey ee la lahaa oramadu waa irir salaale kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
May sxb Makhaayada puntand maxamuud saleeaban iska Leh lkn qaybtayda Makhaayada waanu leenahay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Sanadkan waxaan ka baqaya in ay na dhaafiyaan madaxweyne Ku xigeenka oo ay ka dhici doonto puntland baa Bari hore jirijirtay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rag badan oo halkaan wax ku qora waxaa soo
Baxay wajigooda saxda ah qaran dumis dalkaan wa
Dhaqaaqay isbaaro danbe loo dhigan maayo reer
Hebelow kaca iyo wawareey dhamatay dadkada
Dhinac ka raac
Sanadkan majeerteenku waxay U niikinayaan warsangeli iyo leelkase , lkn warba wuxuu taaganyahay markaanu weyno kursiga madaxweyne Ku xigeenka , 8 wasiir iyo 17 xildhibaan . Hadey taasi dhiciweydo , puntland waxay noqoneysa Rajactu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waa in kow Laga Soo bilaabo madaama heshiiskii 1998 la jabiyey , majerrteena madaxweyne ma helayaan .
Puntand waxaa Lagu dhisay Heshiis bulsho . Hadii heshiiskaas la jabiyo Dee puntland ma sii jireyso .
Miyaadan Horta hargiesa aadeyn ?? Mise waxaad ma baqeysa in Lagu cunsuriyeeyo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Qof Dambiile ah oo la yidhaa Mukhtaar Roobow ayaa la xidhay oo maxkabad ayaa la saaridoonaa.Dawladu ninkaasi ayay xidhay waana waxa ay dawlad u tahay.In Dambiile la xidho oo dadka xunxun Bulshada laga qabto waa sunaha dawladnimada.
Raxanwayn hadii ay u dagaalamayaan ninkaasi la xidhay way qaldanyihiin.Xataa Diinta Islaamka ayay ku gafeen.Dambiga waxaa loo xisaabiyaa shaqsiyan oo xataa Mukhtaar walaalkii lama taaban karo.Dambiilahu marka uu reer Hebel noqdo dadnimo waa la kala tagay.
Marka uu arinku sidaa yahay dawladu ha isticmaasho awoodeeda dadkana ha layso – saa waa dad buka oo aan wax faaiido ah u lahayn naftooda iyo Bulshadaba.Dadka buka oo dhan waa in Bulshada laga qabtaa.Wax aan Reer hebel ahayn garanmayso Somalidu.
Somaliya way qudhuntay oo way wasan tahay.Waa wadan wasan oo qudhmay.Dadka ku nooli way bukaan masgaxiyan.Inta caafimaadka qabtaa ha israaco oo ha layso inta bugta ee dhalaysa caruurta bugta.
Baryada Ajaanibka iyo gaajada ayaa nolol laga dhigtay.
Agoontii Tegreega iyo dhashii Maqale waa in laga sifeeyaa Somaliya.
Nimanka ayagaba waa lagu cunsuriyeeyaa Xamar maxaa diidan iney i haruufaan.
adigu ha dhex galin affairs caasimadaha
— sxb ma waxaad leedahey hadey Max’uud Saleemaan rabaan inaan u camirno maqaayadda oon uga eexano MJ kale waa iney jeebka noo buuxiyaan..
waan ogahey waxaad isula joogtaan waa sidii lagu cuni lahaa canshuurta reer BOOSAASO..
aniga ma waxaad i moodo ey sida jufada yar inaan marna TIGREE walaalo la sheegto, marna reer baadiyaha Libiya.
Kaare kaalmo iyo Dambiil qaad kursi, ugama baahni OROMA iyo TIGREE iyo Axmaaro injirey.
Faroole miyaad igu qaldeysaa
XAMAR CUNSURIYAD IYO QABYAALAD KAMA JIRTO .REER XAMARKU WAA BIISAANIYIIN LKN HARGIESA HADAD TAGTIG WAA LAGU CUNSURIYEEN .
HARGIESA KUMA DHEXDHUUMANKADTID QOFKASTA WAA LA YAQAAN QABIILKIISA LKN XAMAR IYO GAROOWE LAMA YAQAAN QABIILKA .
DEKADA MUQDISHO IYO BOOSAASO WAA ISKU MID , LABADABA GANACSATO SOOMALIYEED BAA ISTICMAALA.
ANIGU WAXAAN KU ODHAN LAHAA HARGIESA HAYSKU TAGIN KABA CASEEYAHA BAA FAHMAYA QABIILKAAGA KKKKKKKKK
ACWW:Dhamaan Somaliweyn waan idin salaamayaa.Salaan ka dib.
Latest Mukhtaar Robow waxaan idiin hayaa in ay fiican tahay dadku in uu u kala baxo shacab iyo xukuumad.Waxaan ka wadaa.
1-Mukhtaar qabashadiisa 100%waxaa lug ku yeeshay siyaasiinta digil iyo mirifle
2-Qabashadiisa inta aanay dhicin waa lala hadlay loona sheegay ciddii ku siisay shahaadad waa qaldanaayeen loona sheegay iskana indha tireen.
3-Cadaadis badan ka dib wuu diiday isagoo talooyin ka qaadanaayay rag isku sheegay mucaarad,balse ah qaswadayaal wax ay rabaan aan la aqoonin.
Mukhtaar waa la shirqoolay waxaan wax ka og qabashadiisa maamulka koonfur galbeed,siyaasiyiin caan ah,iyo waxgaradka digil iyo mirifle waana xirmay case-kaas.
Waxaan idin xasuusinayaa.
A-Mukhtaar isagoo hareeraysan ayay dawaladda badbaadisay.Tusaale marka hubka iyo rasaasta ay ka go’aan gurmadna uusan heli lahayn ka warama maxaa ku dhici lahaa?Waa la badbaadiyay runtii.
B-Waxaa heshiisku ahaa in aanu lug ku yeelan wax siyaasad ah inta arrintiisu dhinac u dhacayso,taa bedelkeed uu xor yahay balse aan amaanka wax u dhimin.Yaa u ogolaaday 70 nin hubaysan in uu la soo galo magaalada?yaa siiyay awoodda ah in uu u hamjabo waliba dhaho waan idin dilayaa musharaxiinta kale?FG:Waa nin horey dad usoo laayay maxaa ka hor istaagaaya arrintaas?
C-Guddomiyaha parlamanka ayaa hoos gashatay si dawalada loogu carqaladeeyo Mursal wuxuu si qarsoodi lacagna ka soo qaatay EU.
Waxaan haynaa in qaskan uu ka weyn yahay ROOBOW kii qaylin lahaa iyo kii kale.
AAN KUSOO XIRO DULMI MA TAAGEERI DOONO SHACAB SOMALIYEED IYO AMXAARANA WAXAAN LA JIRAYAA SHACABKA SOMALIYEED WAASE MARKA AANAY NOQON QASWADANIMO IYO DAWLAD DIIDNIMO OO KALIYA.